Isomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isomiso siyinkinga ekhathazayo ethinta izindawo eziningi ngokwengeziwe zenhlonhlo nezinye izindawo ezihlanganisiwe. Abanye bathi inqubo ejwayelekile, abanye bathi kuyiphutha le- ukushintsha kwesimo sezulu, imibono ehlukahlukene njalo esiholela esiphethweni esifanayo, izindawo eziningi zithinteka isikhathi eside se- isomiso.
Kulesi sikhala ungathola imininingwane ehlukahlukene ngalesi sihloko, idatha neminye imininingwane ehlukile ukuze uthokozele konke okuphathelene ne- isomiso. Imininingwane ingamandla futhi uzoyithola.
Ukuguquka kwesimo sezulu kubanga izinkinga zomhlaba ezibucayi okuzofanele sibhekane nazo kulelikhulu leminyaka. Eyodwa…
Isomiso esinyuswe yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu senza iKapa, ​​idolobha lesibili ngobukhulu ...
Ngokunikwa yisimo sesomiso iSpain esihlupheka ngaso, iqembu leCitizens lephalamende lethule isiphakamiso sokuthi ...
Ngokuya ngesimo sesomiso iSpain esihlupheka ngaso, uMnyango Wezolimo kanye Nezokudoba, Ukudla Nezemvelo ...
Imvula eye yawa eSpain emasontweni edlule isize ukubuyisa amazinga e ...
Izingane yizona ezimbi kakhulu ngokushisa komhlaba. Lokhu kuyiqiniso, ngeshwa, elingenakho ...
Njengoba abantu bekhuluma njalo nsuku zonke, isomiso eSpain sinzima kakhulu. Amarekhodi emazingeni we ...
Isomiso yinto yemvelo equkethe ukwehla kwemvula engaphansi kwesilinganiso (yini ...
Kulo nyaka sibona omunye wemiphumela emibi kakhulu yokuguquka kwesimo sezulu: isomiso. Kakade…
Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa amazinga okushisa aphakathi komhlaba, kwandisa imvamisa nokuqina kwesomiso futhi ...
ITablas de Daimiel National Park etholakala eCiudad Real ihlaselwa yisomiso kanye ...